….त्यसपछि निताको मृत्यु भयो « Etajakhabar
सहवास गर्दा महिलाले छुट्टै आवाज निकाल्छन् । आवाज त निकाल्छन् तर किन निकाल्छन् त यस्तो आवाज यो सबैका लागि रोचक विषय हुन सक्छ । आखिर अधिकांश महिला किन यस्तो आवाज निकाल्छन् ? के यस्तो आवाज आनन्दको अभिव्यक्ति हो या मनोरञ्जनको चरम अवस्था ?
यसबारेमा केही वैज्ञानिकले आवाज निकाल्नु नाटक मात्र हो भनेका छन् भने केही अनुसन्धानकर्ताहरूले आनन्दको अनुभूति हो भनेका छन् । साथै केहीले सहवासको समयमा महिला अचेत अवस्थामा पुग्ने भएकाले यस्तो आवाज निकाल्ने जनाएका छन् । तर यसबारे पछिल्लो अनुसन्धानबाट निकालिएको निष्कर्ष भने अलि फरक छ ।
सहवासको क्रममा यदि तपाइको पार्टनर उ’फ… आ’ह… या’ आ’उ’च… जस्ता आवज निकाल्छ भन्दैमा तपाइले यो सोच्नु भएन कि, उनले चरम सन्तुष्टि प्राप्त गरिरहेका छन् । किनभने यो देखावटी मात्र पनि हुनसक्छ । सहवास ग’र्दा कि’न आ’वाज निकाल्छन् महिला ?
ब्रिटेनका शोधकर्ताहरूको एक सोधमा ‘२५ प्रतिशत महिला सहवासका क्रममा आवाज निकालेर चरम आनन्द लिएको’ अभिनय गर्ने खुलासा गरेका छन्। अध्ययन अनुसार सहवास गर्दा महिलाहरू क’रा’उ’नु भनेको च’र’म स’न्तु’ष्ट पाउनु हो । शोधका अनुसार महिलाहरू सहवास गरिरहेको बेला आवाज यसकारण निकाल्छन् कि, जसले पुरुष साथीलाई उ’त्ते’जि’त गर्न सकोस्। शोधकर्ताले १८ देखि ४८ वर्ष उमेर समूहका ७१ महिलामा यस्तो शोध गरेका थिए।
अधिकांश महिलाहरू सहवासबाट च’र’म आ’न’न्द लिन नपाएको उक्त सोधमा उल्लेख छ । ९० प्रतिशत महिलाहरूले आफूहरू च’र’म आनन्दसम्म नपुगेको बताएका थिए । ८७ प्रतिशत महिलाहरूले चाँहि आफ्नो पार्टनरप्रति प्रेम सम्बन्ध सुमधुर राख्नकै लागि यसरी आवाज निकाल्ने गरेको खुलाए।
शोधकर्ताले यस व्यवहारको पछाडि ‘स’ह’वास लगायतका कार्यमा पुरुषप्रधान मा’न’सि’कता हा’वी भएको’ निष्कर्ष निकालेका छन् । यसैले नै महिलाहरू आफ्नो सन्तुष्टिका साथ सम्झौता गरेर पनि पुरुष पार्टनरलाई खु’सी तु’ल्याइरहेका हुन्छन्।
महिलामा आ’र्ग’ज्म अधिकांशः फोर प्लेको क्रममा धेरै देखिने गरिन्छ । यस क्रममा महिलाहरू आ’वा’ज निकाल्ने गर्छन् । महिलाहरू यस्तो आवज त्यसवेला निकाल्छन्, जतिबेला पुरुषहरू च’र’मो’त्क’र्ष’मा पुगेका हुन्छन्।
यो पनि : एलन मस्कः कथा संसारकै धनी व्यक्ति बन्ने यात्राको, लक्ष्य चन्द्रमा र मंगल ग्रहमा बस्ती बसाल्ने
स्पेस-एक्सका संस्थापक तथा विद्युतीय कार कम्पनी टेस्लाका सीईओ मस्क सन् २०१७ देखि लगातार धनाढ्यको शीर्ष स्थानमा रहँदै आएका इ-कमर्स तथा क्लाउड कम्प्युटिङ कम्पनी अमेजनका सीइओ जेफ बेजोसलाई उछिनेर गत बिहीबार पहिलो नम्बरमा आएका हुन् ।
गत बिहीबार मस्कको कम्पनीको सेयर मूल्यमा ७.९ प्रतिशतको उछाल आउँदा उनले विश्वका धनाढ्यको सूचीको एक नम्बरमा फड्को मारेका उनको खुद सम्पत्तिमा त्यसअघि पनि २०२१ जनवरी ६ सम्ममा (२०२० जनवरी ६ को तुलनामा) झन्डै साढे पाँच सय (५४८) प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।
यसले गर्दा नै सबैभन्दा धनीसम्मको यात्रा तय गरेका मस्क एक वर्षअघि विश्वका सर्वाधिक २० धनाढ्यको सूचीमा पनि कहिँ कतै थिएनन् । अघिल्लो वर्ष उनीसँग मात्र २९ अर्ब डलरको नेट वर्थ थियो । तर एक वर्षमा झन्डै १६० अर्ब डलरले नेट वर्थमा वृद्धि भएका मस्कले अहिले कयौं अर्बपतिहरुलाई पछाडि पारेका छन् ।
एकै वर्षमा सम्पत्‍तिमा यसरी नाटकीय वृद्धि भएका मस्कले तय गरेको संसारकै धनाढ्यसम्मको यात्रा कम रोचक छैन ।
मस्कको विद्युतीय कार कम्पनी टेस्लाको बजार मूल्य (मार्केट भ्यालु) मा यस वर्ष उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । गत बुधबार यो पहिलोपटक ७०० अर्ब डलर मूल्यको कम्पनी बन्यो । यो मूल्य संसारका ठूला अटो कम्पनीहरु टोयोटा, फक्सवागन, ह्युन्डाई, जीएम र फोर्डको संयुक्त कुल मार्केट भ्यालुभन्दा पनि बढी हो ।
अमेरिकाका कयौं आर्थिक विश्लेषकहरुले लेखेका छन्- ‘अमेरिकामा सत्ता बदलिएपछि एलन मस्कको कम्पनीको भविष्य अझै सुनौलो हुन सक्छ ।’
उनीहरु थप भन्छन् – ‘डेमोक्र्याट सत्तामा आएपछि विद्युतीय कार कम्पनी टेस्लाको काम अझै बढ्नेछ, किनकि जो बाइडेनको पार्टीले चुनावी अभियानका दौरान ‘ग्रीन एजेण्डा’ लाई बढावा दिने बाचा लगातार गरेका थिए ।’
काममा महत्त्वाकांक्षी मस्क
जोखिम मोल्न र फरक किसिमको काम गर्न रुचाउने मस्कको कामको दायरा केवल ‘फ्युचर कार’ बनाउने कम्पनीमा सीमित छैन, उनको कम्पनी टेस्ला विद्युतीय कारमा लगाउने पुर्जा र ब्याट्री पनि बनाउँछ । र, ती ब्याट्री र पुर्जा टेस्लाले अन्य कार निर्माताहरुलाई बेच्छ । साथै, टेस्लाले घरमा लगाउने ‘सोलार इनर्जी सिस्टम’ बनाउँछ जसको माग बढ्दै गएको छ ।
मस्कले एक अन्तरिक्ष अन्वेषण कम्पनी ‘स्पेस-एक्स’ पनि चलाउँछन् । साथै, उनी अमेरिकामा ‘सुपर-फास्ट अन्डरग्राउन्ड टनेल ट्रान्सपोर्ट सिस्टम’ (हाइपरलुप) को खाका पनि तयार गरिरहेका छन् । यो ‘लुप ट्रेन’ परियोजना सुरुमा अमेरिकाको लस भेगासमा संचालन गर्ने गरी टनेल खनिसकेको बताइएको छ । मस्कको यो लुप ट्रेनले आधुनिक यातायातमा क्रान्ति ल्याउने समेत विश्वास गरिएको छ ।
अमेरिकी अर्बपतिका रूपमा चिनिएका एलन मस्क (४९) को जन्म दक्षिण अफ्रिकामा भएको हो। उनकी आमा क्यानेडियन र बाबु दक्षिण अफ्रिकी हुन्।
उनी भन्छन्, ‘बच्चामा म ज्यादै शान्त बस्थेँ। यसले गर्दा मलाई धेरै दुःख पनि दिइयो।’
१० वर्षको उमेरमा उनले कम्प्युटर प्रोग्रामिङ सिके र १२ वर्षको हुँदा नै हुनले ‘ब्लास्टर’ नामको एक भिडियो गेम बनाए, जसलाई एक स्थानीय म्यागेजिनले त्यसबेला (सन् १९८३ मा) पाँच सय अमेरिकी डलरमा किन्यो। यसलाई मस्कको पहिलो व्यापारिक उपलब्धी भन्न सकिन्छ।
मस्कको व्यवसायिक सुरुआत खासमा २७ वर्षको उमेर (सन् १९९९) मा सुरु भयो जब उनी र उनका भाइ किम्बलले आफ्नो सफ्टवेयर कम्‍पनी ‘जिप-२’ का लागि एक सफल डिल फेला पारे। त्यसबाट प्राप्त पैसालाई मस्कले एउटा नयाँ कम्पनी स्थापना गरे जसको नाम थियो- एक्स डट कम। पैसा ट्रान्सफर गर्ने व्यवस्थामा यसले क्रान्ति ल्याउने उक्त कम्पनीको दाबी थियो।
मस्कको सोही कम्पनी आज ‘पे-पल’ को नामले चिनिन्छ, जसलाई उनले स्थापना गरेको तीन वर्ष पूरा नहुँदै सन् २००२ मा ‘इ-बे’ ले खरिद गरेको थियो। त्यसवापत मस्कले १६.५ करोड अमेरिकी डलर पाएका थिए। यो उनको करिअरको ठूलो उपलब्धी थियो।
त्यसपछि मस्कले अन्तरिक्ष अन्वेषणको प्रविधिमा काम गर्न सुरु गरे। उनको उक्त प्रोगामलाई ‘स्पेस-एक्स’ को नाम दिइयो, जसले ‘मान्छे आगामी दिनमा अन्य ग्रहमा पनि बस्न सक्छन्’ भन्यो।
सन् २००४ मा मस्कले विद्युतीय कार कम्पनी टेस्ला स्थापना गरे र भने – ‘भविष्यमा सबैथोक विद्युतीय हुनेछ, अन्तरिक्षमा जाने रकेट पनि । र, टेस्लाले यो परिवर्तन ल्याउनेमा अहम् भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।’
के हो सफलताको रहस्य?
मस्कको बिजनेसप्रतिको ‘एटिट्युड’ अर्थात् व्यापार र आफ्नो कामका सवालमा अलग दृष्टिकोण नै उनको सफलताको राज भएको बीबीसीका संवाददाता जस्टिन रलेटले उल्लेख गरेका छन्।
केही वर्षपहिले रलेटले गरेको साक्षात्कारमा मस्कले भनेका थिए, ‘मलाई थाहा छैन मसँग कतिको सम्पत्ति छ। यो नोटको बिटो भएजस्तो होइन। टेस्ला, स्पेस एक्स र सोलार सिटीमा मेरो हिस्सेदारी र बजारमा त्यसको केही मूल्य छ। तर मलाई यो सबले कुनै फरक पर्दैन, किनकि मेरो काम गर्नुको लक्ष्य यो होइन।’
रलेट लेख्छन्, ‘मस्कको यो दृष्टिकोणले सायद काम गरिरहेको छ। उनीसँग आज जति सम्पत्ति छ, त्यसबाट उनले चाहने हो भने संसारका कतिपय ठूला कार निर्माता कम्पनी एकसाथ खरिद गर्न सक्छन्। यो साल उनी ५० वर्ष हुनेछन्, तर एक ‘धनाढ्य व्यक्ति’ का रूपमा संसारबाट बिदा हुने सपना उनको बिल्कुलै छैन।’
मस्क भन्छन् कि, उनी मंगल ग्रहमा एउटा ‘बेस’ (बस्ती) बनाउनमा आफ्नो पुँजीको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा खर्चिन चाहन्छन् र उनले यस मिशनलाई सफल बनाउन आफ्नो सारा सम्पत्ति लगाए भने यसमा उनी स्वयंलाई कुनै आश्चर्य हुनेछैन।
मंगल ग्रहमा एक मानव बस्ती, मस्कको नजरमा असाध्यै ठूलो सफलता हुनेछ।
उनी मान्छन्, यसले भविष्य राम्रो हुनेछ। स्पेस-एक्सको स्थापनालाई लिएर पनि बीबीसीसँग मस्कले भनेका थिए, ‘मैले कम्पनी यसकारण बनाएँ किनकि म यो कुराबाट असन्तुष्ट थिएँ कि अमेरिकी स्पेस एजेन्सी अन्तरिक्ष अन्वेषणलाई लिएर किन थप महत्त्वाकांक्षी छैन, यसले किन अझ अगाडिको बारे सोच्न सकिरहेको छैन। म आशा गर्छु कि भविष्यमा चन्द्रमा र मंगल ग्रहमा हाम्रो बसोबास होस् र त्यहाँका लागि यहाँबाट लगातार उडान चलोस्।’
‘मान्छेले मलाई इन्जिनियरका रूपमा चिनुन्’
मस्क चाहन्छन् कि मान्छेले उनलाई एक लगानीकर्ताका रूपमा भन्दा पनि एउटा इन्जिनियरका रूपमा चिनुन्। रलेटसँगको साक्षात्कारमा उनले भनेका थिए, ‘म हरेक बिहान कुनै नयाँ प्राविधिक समस्याको हल खोज्नका लागि ब्युँझिन चाहन्छु। बैंकमा कति पैसा छ, यसलाई म सफलताको मापक मान्दिन।’
रलेट लेख्छन्, ‘मस्क कार उद्योगमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन चाहन्छन्, उनी मंगल ग्रहमा कोलनी बनाउन चाहन्छन्। भ्याकुम टनेलमा चल्ने सुपर-फास्ट ट्रेन ल्याउन चाहन्छन्। मान्छेको दिमागसँग एआई अर्थात् आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जोड्न चाहन्छन्। यो सबै कुरामा एउटा समानता छ – उनले यस्तो भविष्यको कल्पना गरेका छन् जुन सन् १९८० को दशकको सुरुआततिर पाइने बच्चाको पत्रिकाहरुमा पाइन्थ्यो । र यो कुरा लुकेको छैन कि मस्कको बाल्यकाल दक्षिण अफ्रिकामा असाध्यै धेरै पत्रिका, किताबहरु पढेर र फिल्म हेरेर बितेको थियो।’
मस्क परिवर्तको धिमा गतिमा विश्वास राख्दैनन् । उनी चाँडोभन्दा चाँडो ‘फोसिल फ्युल’ लाई पछाडि छोड्न चाहन्छन् । साथै, मानव अस्तित्वलाई लामो समयसम्म कायम राख्नका लागि उनी मंगल ग्रहमा उपनिवेश विकासको पक्षमा छन् ।
जोखिम उठाउने बानी
एलन मस्क आफू जोखिम उठाउने व्यक्ति हुन् र उनले यो पटकपटक साबित गरेका छन् । २००८ मा जब संसारले आर्थिक मन्दीको सामना गर्दा मस्कको हालत पनि असाध्यै खराब भएको थियो । त्यसपछि उनको कम्पनीले कयौं असफलताहरु देख्यो । एपेस-एक्सको पहिलो तीनवटै स्पेस लञ्च असफल भए । टेस्लामा पनि उत्पादनसँग जोडिएका कयौं समस्‍याहरु आइरह्यो र मस्क संकटमा फँसे ।
उनले भनेका थिए – एकपटक यस्तो समय पनि आयो जब उनलाई आफ्नो खर्चका लागि साथीहरुसँग पैसा सापटी लिन परेको थियो ।
तर के उनलाई कहिल्यै टाट पल्टिने डर भएन? यो प्रश्नको जवाफमा मस्कले रलेटसँग भनेका थिए, ‘धेरै भए के हुन्छ, मेरा बच्चाहरुले सरकारी स्कुल जानुपर्ला । यसमा कुन ठूलो कुरा भयो, म आफैं सरकारी स्कुलमा पढेको हुँ ।’
रलेट लेख्छन्, ‘हाम्रो भेटका क्रममा मैले पाएको थिएँ कि मस्क एक चिजबाट जरुर निराश थिए र त्यो थियो – आलोचनाहरु । उनको भनाइ थियो कि – आलोचनाहरु कुनै ठोस कुराका आधारमा मात्र हुनुपर्छ, तर मान्छेहरु टेस्ला कहिले डुब्छ भनेर पर्खिएरै बसेका छन् । यद्यपि, मस्कले भने कि उनी आलोचनाका कारण आफ्नो लक्ष्यमा कहिल्यै फेरबदल गर्ने छैनन् । मस्कका अनुसार, जब उनले स्पेस-एक्स र टेस्लाको जग हालेका थिए तब उनलाई स्वयम् विश्वास थिएन कि उनी यसबाट पैसा कमाउन सक्नेछन् ।’
काम गर्ने लत
एलन मस्कलाई नजिकबाट जान्नेहरु भन्छन् कि उनलाई काम गर्ने लत छ । टेस्ला मोडेल-३ लाई तयार गरिरहेको बेला उनले भनेका थिए कि उनी हप्तामा १२० घन्टा काम गर्छन् र त्यसमा उनलाई मजा आउँछ ।’
कोरोना महामारीको दौरान जब सान फ्रान्सिस्कोस्थित उनको फ्याक्ट्री बन्द गर्नुपर्यो, तब लकडाउनको प्रतिबन्धका विरुद्ध मस्क खुलेर बोले । उनले भने, ‘जसले महामरीको हौवा बनाइरहेको छ ती बेवकुफ हुन् ।’ उनले घरमै बस्नु भन्ने आदेशलाई ‘जबरजस्ती’ भने, र भने ‘कोभिड लकडाउन संवैधानिक अधिकारको विरुद्ध छ ।’
महामारीको दौरान नै मस्कको घरमा छोराको जन्म भयो । उक्त अवसरमा उनले ट्विटमार्फत संसारलाई भने कि उनले छोराको नाम ‘एक्स एई ए-१२’ (X Æ A-12) राखेका छन् ।
केही मान्छे मान्छन् कि एलन मस्कको मनमा के छ भन्ने पढ्न सकिँदैन र उनको व्यवहारको पूर्वानुमान लगाउन कठिन छ । तर यसको उनको काममा थोरै पनि असर देखिँदैन । उद्यमीका रुपमा उनी एक दूरदर्शी व्यक्ति हुन् ।
सेप्टेम्बर २०२० मा उनले भनेका छन्, ‘चाँडै नै टेस्लाका सबै कार ‘सेल्फ ड्राइभिङ’ युक्त हुनेछ ।’ आगामी तीन वर्षमा उनले सस्तो विद्युतीय कार ल्याउने पनि लक्ष्य राखेका छन् ।